महिनावारी गडबढ किन हुन्छ ? – Etajakhabar
डा. ज्योती अग्रवाल महिनावारी समयमै नभएको गुनासो गर्ने महिलाको सँख्या दिनानु दिन बढ्दै गएको छ । नियमित समयमा महिनावारी नहुनुको कारणमा हर्मोनको असन्तुलन एक कारण हो।
‘शरीरमा हुने इन्ड्रोक्रााइन ग्ल्यान्डले उत्सर्जन गर्ने हर्मोनले महिनावारी समयमै गराउने गर्दछ । यसरी उत्सर्जन हुने हर्मोनको सन्तुलन बिग्रियो भने महिनावारी गडबड हुन्छ ।
कहिलेकाहिँ खानपानको कारणले पनि महिनावारी तलमाथि पर्न जान्छ । पोषणको अभावका कारण महिला कमजोर हुने गर्दछन् । त्यस्तै असाध्यै मोटाउँदा अथवा दुब्लाउदा शररीरमा महिनावारी गराउने तत्वको मात्रा घटबढ भई महिनावारीमा अनियमिता आउने गर्दछ ।
तनाव पनि महिनावारी गढबढीको कारणमध्यमै पर्छ । बढी तनाव भएको महिना महिनावारी तलमाथि पर्न सक्छ । परिक्षाको समयमा पनि किशोरीहरुको महिनावारीमा तलमाथि हुन सक्छ ।
पाठेघरका विभिन्न किसिमका समस्याले पनि महिनावारी रोकिन सक्छ । यसैगरी उमेरका कारण पनि महिनावारीमा गढबढी आएको हुनसक्नेमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ जस्तो कि महिनावारी भएको शुरुको ४ देखि ५ वर्षको अवधिमा तलमाथि भइनै रहन्छ र महिनावारी सुक्ने अवस्थामा पनि तलमाथि परे डराउन पर्दैन ।
केही महिलामा १५ दिनको फरकमा पनि महिनावारी हुने समस्या हुन्छ । यो एकदम कम महिलामा हुने समस्या हो । महिनावारी हुने तालिका पहिलेदेखि नै १५ दिन रहेको भए सामान्य नै हो । एक्कासी १५ दिनमै फेरि दोहोरियो भने चाहिँ कुनै खराबी आएको बुझनुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा चाहिँ ढिलो नगरी चेकजाँच गराउँदा राम्रो हुन्छ ।
पछिल्लो समय आकस्मिक गर्भ निरोधक चक्कीको प्रयोग बढेको छ । यसको गलत प्रयोगले पनि महिनावारीमा समस्या निम्त्याएको हुन सक्छ ।
महिनावारी ३० दिनमा भइरहेको थियो तर १० दिन ढिला भयो भने त्यसलाई गडबढी भएको बुझ्नुपर्छ तर कसैको हरेक महिना ४० दिनको फरकमा हुन्छ भने त्यसलाई गडबढी मान्न हुँदैन ।
‘महिनावारी गडबढी व्यक्तिपिच्छे फरक पर्ने हुन्छ । २८ वा ३० दिनमै महिनावरी हुनु पर्ने कुनै नियम छैन । शुरु देखि जस्तो भइरहेको छ । अहिले पनि त्यस्तै हो भने त्यो सामान्य हो । यसैगरी तीन चार दिनको तलमाथि हुनुलाई पनि सामान्य नै मानिन्छ । स्वास्थ्य खबर पत्रिकाले छापेको छ ।
अनियमित महिनावारीले हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि असर पारिरहेको हुन्छ । यसबाट जोगिन शरीरलाइै चाहिने पोषक तत्वको नियमित सेवन गर्नुपर्छ । तनावलाई कम गर्ने विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यस्तै समय–समयमा थाइराइड जचाइ राख्ने एवम् डाक्टरको परामर्श लिइरहने गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन १८, २०७३ समय: ५:५९:०५
तीनदेखि सुत्केरी बेथा लागेको सन्तमायाको ज्यान जोगाए दीपकले, उधारोमा हेलिकप्टर चार्टर गरे काठमाडौं ल्याए (भिडियो)
नेपाल इजरायलबीच साझेदारीको विकास गरिने
अबैध कुखुरा रोक्न प्रहरी सगं गुहार माग्दै कुखुरा व्यवसायी
खेतीयोग्य जमीन बाँझो राख्न नपाइने